निर्णय गर्नुअघि… « Nepali Digital Newspaper
२९ पुष २०७७, बुधबार ०१:००
समयक्रममा नेताहरू मात्र होइन हामी नागरिक पनि आत्मकेन्द्रित बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुने हुँदा प्रजातन्त्रमा नागरिकको भूमिका सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । मतदानमार्फत मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकार साथमा भएका हामी जनताले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ? अब आफूले आफैलाई फर्किएर हेर्ने बेला भएको छ । के हामी स्वार्थरहित छौँ ? के हामी बिनाप्रभाव मतदान गर्छौं ? जसले मुलुकमा ३० वर्षसम्म नारा, जुलुस, आरोप/प्रत्यारोपबाहेक अरु खासै केही गरेन फेरि हामी उनीहरूलाई नै मतदान गर्ने ? राज्यसंरचनामा रहेकाले मात्र होइन निर्णय गर्नुअघि जनताले पनि सोच्ने बेला आएको छ । न्यायालय, निर्वाचन आयोग या यस्तै महत्वपूर्ण निकायका साथै हरेक नेपाली नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट कुनै निर्णय गर्नुअघि स्वार्थको बस्त्र उतारी मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरौँ ।